Amazon နဲ့ BestBuy တို့မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ BlackBerry Keyone Black Edition – AsiaApps
March 5, 2018 March 6, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Amazon နဲ့ BestBuy တို့မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ BlackBerry Keyone Black Edition
BlackBerry Keyone ဟာ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး စွဲဆောင်မှုကောင်းမွန်လှတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံတွေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၈ မှာတော့ BlackBerry Keyone ရဲ့ Black Edition ဟာတစ်ဖန်ပြန်လည်ထွက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Keyone Black Edition ဟာတော့ U.S ရဲ့အကြီးဆုံး Online retailer တွေဖြစ်တဲ့ Amazon နဲ့ BestBuy တို့ဆီကိုပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ကပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ သိသိသာသာကြီးကွာဟသွားတာမျိုးမရှိပေမယ့် အနည်းငယ်သေသပ်သွားတာကိုတော့တွေ့ရမှာပါ။
??#BlackBerry #KEYone Black Edition is now available online @amazon & @BestBuy https://t.co/VWvpYDM6dT pic.twitter.com/G0GMb28W0c
— BlackBerry Mobile (@BBMobile) March 1, 2018
Keyone Black Edition ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၄.၅ လက်မရှိနေပြီး ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကို Corning Gorilla glass နဲ့ကာကွယ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Qualcomm Snapdragon 625 processor နဲ့ပံ့ပိုးထားပြီး ဖုန်းဘက်ထရီရဲ့ တစ်ဝက်ကို နာရီဝက်ကျော်ကျော်နဲ့သွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအပိုင်းက 3505mAh အထိပါဝင်ပြီး တစ်နေ့လုံးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ် (အဲ့ဒါကတော့သုံးကြည့်မှသိမှာပါ :3)။
ကင်မရာအရှေ့ပေါက်က 8MP ရှိနေပြီး အနောက်ဘက်ကတော့ 12MP ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာကတော့ auto focus ပါ။ OS ကတော့ Android 7.1 Nougat နဲ့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး Fingerprint system ပါပံ့ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Keyone ဟာ Touch screen နဲ့ Key pad နှစ်မျိုးရောစပ်နေတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီး Key pad အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ BlackBerry Keyone review မှာပြောထားသလိုပါပဲ။
လက်ရှိ Amazon မှာ Keyone ရဲ့ Black Edition အပြင် Limited Edition Black နဲ့ Factory Unlocked တို့ကိုပါရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးကွာဟနေတဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ Specification တွေကိုလေ့လာချင်ရင်တော့ ? Amazon
Android, Blackberry, Deals